Aaway Best Cities The Waayo Foodies In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Aaway Best Cities The Waayo Foodies In Europe
Cunnadu waa sidaas oo ammaanta, gaar ahaan cuntada macaan. Aad bay u fududahay in ay umushu la markuu ku nool Europe ku siinayaa sabab aad u badan, waxaa ka! The magaalooyinka ugu wanaagsan ee Foodies yihiin in Europe, noogu aamini aynu nahay foodies sidoo, iyo si aad marka aad doonaa iyada oo la blog this! Just, taxadir leh u akhri.
Halkan doorashada ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee foodies Yurub in aad gaari kartid tareen:
Qof walba waa ogyahay by hadda - haddii aad doonaysid in aad Europe in ay dhici in jacaylka, aad tahay socday France. Little ma ogtahay in kastoo in aad doonaysid in aad France inuu dhaco jacayl la cunteeyo ay, sidoo! In dal caan ku tahay jacayl oo cunto ah iyo waxa ay isku diyaarineysa, waa adag tahay in qaado meesha uu isagu xiisaynayo in faysteeyaan. Samee qalad lahayn, in kastoo – Lyon waa mid ka mid ah meelaha foodie top France ayaa si ay u sahamiyaan! our talo: rosettes salami jarjartey adeegay pickles cornichon cagaaran cusub iyo shiilan Faransiiska. Lyon xiran yahay Switzerland by rail si aad mar kasta arbushin kartaa in this "dalka shukulaatada"Waayo, ku dhameysteen cuntada macaan.
Lyons helo gudaha darajo ee Best Cities our waayo Foodies Yurub shukulaatada farxaan iyo ka badan.
Brussels ilaa Tareenka Sare ee Lyon
magaalada cunnaha ee Vienna waa halka aad u socoto, waayo, shukulaatada ugu wanaagsan cake in Europe - Sachertorte. Rich ee dhadhanka, mugdi ah oo qoto dheer, Sababtan awgeed, khabiir cake our abaal Austria in ay noqon mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee Foodies in Europe. si halkaas oo si aad u hesho mid ka mid ah? In mid ka mid ah guryaha bunka Vienna ee! Tani waa cake saxiixa ee dalka, iyo dadka deegaanka hubiso in aad ogtahay waxa si.
FIIRO GAAR AH: Dhag dhowr sawiro of magaalada iyo cunto halka – aad rabto in aad aad u dhalaalay Instagram, ya ma samayn?
Marka aad dareento sida garaacid dhammaan xisbiyada ugu fiican ee magaalada, kaliya la cuno soo baxay ee San Sebastian! Si aad u noqoto qof daacad ah, waxa aad cuni kartaa Tapas meel kasta oo Spain, oo waa inaad u jeclaataa doonaa. LAAKIIN, si aad u hesho BEST OF THE BEST, waxay isku dayaan in magaaladan xeebta. Maxaa ka dhigay meel si gaar ah ugu horrayn waa kala duwan ee dhadhan iyo artistry waxaad dooran kartaa ka. Basbaaska iyo dhanaan, kulul oo qabow, lagu duubay oo casri ah, oo dhan waa in laga helo hal bar a. Isku day a gogo 'yar meel kasta oo aad ka heli. Waxaad noqon doontaa buuxa, laakiin waxa ay noqon doontaa u qalantaa.
Haa, cuntada tareen noqon kartaa cajiib ah laakiin xitaa ma cuntada ugu fiican tareenka barbardhigay Noma Kobanheegan! waa tiir ka mid ah cuntada Nordic, oo waa in aad samayn wax kasta oo aad awood u si ay u tagaan iska baarto. Ma aha oo kaliya ma this mid ka mid ah waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee Foodies in Europe, cunnada ayaa noqotay Maya. 1 kaalinta on liiska San Pellegrino sannado! Haa, qiimaha sare, laakiin dhadhanka aad u hesho waa u qalantaa. Haddii aad rabto in aad arbushin ka badan in Scandinavia tareen, Copenhagen waa stop ah albaab weyn oo loogu talagalay oo kaliya in samaynaya.
Bonn in Tareenadu Copenhagen
Frankfurt inay Tareenadu Copenhagen
Anaga seal liiskayaga Magaalooyinka ugu Fiican Cunnooyinka leh Trieste, Italy
Waxaan ma qori karo Best Cities for Foodies ee Europe oo aan sheegin macaantiis oo dhan Italy. Well ... dhammaantiin ma aha laakiin ugu yaraan qaar ka mid ah.
Trieste iska Empire Austro-Hungarian ilaa Dagaalkii Adduunka. Dhab ahaantii Tani waxay xaq halkan ku darayaa in muhiimadda suxuunta delicious Trieste ee. maxaad? Sababtoo ah taariikhda Trieste ee tagay saamayn la taaban karo ay cunnada. Astaamo aan ahayn suxuunta caadiga ah Talyaani, Trieste faantaa on combos sida cajiib ah oo baastada iyo pizza garab sauerkraut iyo bolse jarjaran, oo la mid ah. Ku raaxayso cunto qurux badan, shukulaatada shiidan, iyo qaxwada heer sare ah magaalada, halkaas oo James Joyce bilaabay qoraal Ulysses. view A cajiib ah guud ahaan Adriya hore waxba kuma yeeli doonaan rabitaanka cuntada, labada. xidhiidhka ka dhexeeya Italy iyo Slovenia waa qumman yahay by rail, si aad u siin kara Slovenia fursad halka xaafada.
Genoa si ay Tareenadu Trieste
Rome si ay Tareenadu Trieste
Milan in ay Tareenadu Trieste
Florence si Tareenadu Trieste
taariikhda, cuntada, iyo Europe mar walba tagaan gacanta ee gacanta, oo hadda aad leedahay fursad si ay u sahamiyaan oo dhan aad si fudud. Ku qor Save Tareenku si aad naftaada u iibsadaan tikidhada tareenka iyo maanta bilaabi tacaburka foodie!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / fr si / de ama / es iyo luuqado badan.
#traveleurope Cuntada Foodie cunnada tareen safarka